Scandinavia Alps: hunhu, mavambo nemakomo | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 29/03/2021 09:57 | Geology
ari scandinavia alps Dzakanyanya kukosha ndedze peninsula yeScandinavia uye dziri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweEurope. Iyi nharaunda yese yakaumbwa neNorway, Sweden uye chikamu cheFinland. Makomo eScandinavia ave achizivikanwa kwazvo munhoroondo yese pese paitaurwa nezvenyika dzeNordic. Inenge 25% yepeninsula yese iri mukati medenderedzwa yeArctic. Iri gomo renzvimbo rinomhanya munzvimbo dzese dzeScandinavia kubva kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kusvika kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwemakiromita chiuru nemazana manomwe.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese hunhu, mavambo uye geology yeScandinavia Alps.
2 Scandinavia Alps uye peninsula
3 Main scandinavia alps
Iyo gomo renzvimbo inomhanya munzvimbo dzese dzeScandinavia uye ine hurefu hwese hwemakiromita chiuru nemazana manomwe. Yakakamurwa kuita mapoka matatu zvichienderana nezvamunopatsanura. Kune rimwe divi, maKiolen vane basa rekuparadzanisa Sweden neNorway, makomo eDofrines anopatsanura Norway nemaTulians ari mudunhu rekumaodzanyemba. Zvese izvi chikamu che makomo eScandinavia akange aripo mazana emamirioni emakore apfuura. Makomo aripo iye zvino anoumba maScandinavia Alps akaumbwa nekuda kwekubonderana pakati pemahwendefa emakondinendi eNorth America neBaltic. Zvese izvi zvakaitika makore angangoita mamirioni makumi manomwe apfuura.
MaScandinavia Alps haana kumira pakukwirira kwavo, asi nekunaka kwavo uye hupfumi mune zvakasikwa. Nzvimbo dzakakwirira kwazvo iGlittertind Mountains, 2452 metres kumusoro, uye Galdhøpiggen, 2469 metres kumusoro, ese ari muNorway ndima. Zita repeninsula rinobva kuScania rinova izwi rekare rinoshandiswa nevaRoma mutsamba dzavo dzekufamba. Izwi iri rinoreva nyika dzeNordic. Nenharaunda yemakiromita 1850 kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba, 1320 m kubva kumabvazuva kuenda kumadokero uye nharaunda inopfuura 750000 mativi emakiromita, Iyi ndiyo peninsula hombe pane kondinendi yeEurope.
Scandinavia Alps uye peninsula
Iyo yose peninsula yakakomberedzwa nemitumbi yakasiyana siyana yemvura. Kune rimwe divi, isu tine Gungwa reBarents kuchamhembe kwechikamu, iyo Gungwa rekuchamhembe kuchamhembe kwakadziva kumadokero chikamu uko Matambudziko eKattegat neSkagerra anosanganisirwa. Kattegat zvirokwazvo ave anozivikanwa kwazvo nekuda kweakakurumbira eVikings akateedzana. Kumabvazuva iGungwa reBaltic iro rinosanganisira Gulf reBothnia uye kumadokero iGungwa reNorway.
Iyo nharaunda yese yakakomberedzwa nechitsuwa cheGotland chinochengetedza zvitsuwa zvakazvimirira zveAlland. Kudya ndiko kunowanikwa pakati peSweden neFinland. Iyi nharaunda yese yakapfuma nesimbi, titanium nemhangura, ndosaka yakave yakapfuma kwazvo kubva panguva dzekare. Pamahombekombe eNorway Oiri uye gasi gasi dhipoziti zvakawanikwa zvakare. Kuvapo kwemadhipatimendi aya kwakabatana zvakanyanya nechimiro chekare chema tectonic mahwendefa uye magma aikwanisa kupinda pakati pemahwendefa.
IScandinavia Alps uye yese peninsula ine nzvimbo ine makomo par kugona. Hafu yenzvimbo iyi yakafukidzwa nenzvimbo ine makomo yaive yeBaltic Shield yekare. Iyo Baltic nhoo haisi chimwe chinhu kunze kwekuumbwa kwedombo kwakatangira angangoita mazana emamirioni emakore apfuura uye izvo zvainyanyo kuve inoumbwa nekristalline metamorphic matombo. Aya macrystalline metamorphic matombo akatanga semhedzisiro yekuwedzera kukurumidza kutonhora kwakaitika semhedzisiro yemagma akadzingwa mumahwendefa. Mazhinji eScandinavia Andes ari muNorway, nepo muSweden nzvimbo dzese dzemakomo dzakakomberedzwa kumadokero kwenyika. Kune rimwe divi, iyo yepamusoro yeFinland ndidzo dzehurefu hwakadzika.
Sekuda kuziva, iyi peninsula ine dzakasiyana siyana nzvimbo dzenzvimbo dzinosanganisira mhenderekedzo, maaizi, madziva uye fjords. Iwo mafjords akaumbwa seV sezvaakasikwa nekukukurwa kwechando uye inogarwa nezvimiro zvegungwa. Iyo fjords yeNorway ndiyo inomiririra uye ndiyo inogona kuoneka mune yakateedzana yeViking. Kana tichienda kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwenharaunda, tinogona kuona maScandinavia Alps ayo anonziwo makomo anopfuura 2000 metres kumusoro. Ivo havango zivikanwa chete nekureba kwavo, asi zvakare sezviratidzo zvinoratidzira kuchamhembe kwemuganhu pakati peNorway, Sweden neFinland.
Kune makomo anodarika zana nemakumi matatu anodarika 130 2.000 metres pakureba Dzinogoverwa munzvimbo nomwe dzinozivikanwa se: Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell, Rondane, Sarek neKebnekaise. Mazhinji emakomo akasunganidzwa muJotunheimen, muSouth Norway.
Main scandinavia alps
Ngatione kuti ndeapi makuru eScandinavia Alps zvinoenderana nenharaunda.
Iwo akakwirira kwazvo pamusoro penzvimbo dzese dzeScandinavia ari muNorway. Saizvozvo, makomo gumi akakwirira uye akagoverwa pakati peOppland neRwiyo og Fjordane matunhu. Gomo reGaldhøpiggen, pamamiriyoni 2469, ndiyo nzvimbo yepamusoro muNorway uye kuScandinavia Peninsula. Nzvimbo yechipiri inogarwa neGomo Glittertind ine 2465 m panzvimbo yayo yepamusoro. Pamberi payo yaionekwa senzvimbo yepamusoro, asi imo nekuti zviyero zvakaitwa zvakaverengwa segirazi raive pamusoro pechisikwa pamusoro. Kwemakore apfuura iyo glacier yanga ichinyungudika uye zvave kutokwanisika kumisikidza zviyero uye kurongeka zvakanaka.
MuSweden pane gumi nembiri misoro inodarika 12 metres pakureba. Ruzhinji rwavo runowanikwa muSarek National Park uye mudunhu rekuchamhembe kwe Kebnekaise inosimbisa iyo Kebnekaise peak ine 2103 metres. Iyo ndiyo yepamusoro soro inoteerera ese echando anoifukidza. Dai aya mazaya echando akange asipo, iyo yepamusoro soro ingadai iri Kebnekaise Nordtoppen
Kana tichienda kumakomo eFinland, angangoita ese ari pazasi pemamita 1500 ekukwirira uye akanyanya kuzivikanwa ari muFinland Lapland. Pano panobuda pachena Gomo reHalti rakareba mamita 1324 uye ndiro rakakwirira kupfuura mamwe ose. Iyo iri muNorway uye inogovera chimiro chemakomo, Finland.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezveScandinavia Alps uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Scandinavia alps